1. ဇူလိုင်လ ၁၉ရက်နေ့အတွက် ၇ရက်သားသမီး ဗေဒင်
2. ဂဠုန်ဦးစောမိသားစုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ထဲဘာမှမရှိပါဘူး၊ ကံ ကံရဲ့ အကျိုးကြောင့် ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်ခဲ့တာပါ ဆိုတဲ့ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၏ မြေး ဦးသန့်စင်ချိုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
3. ပူးပေါင်းကြံစည်သူ လူသတ်သမား ၉ဦးနဲ့ လုပ်ကြံခံရသူ အာဇာနည် ၉ဦးတို့ရဲ့ ၁၉ ဇူလိုင် မမေ့နိုင်
3. အာရှဒရာမာတွေထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ အမေရိကန်ဆိုဒ်ကနေ ဆုငါးဆုရရှိသွားတဲ့ ‘Guardian’
1. မီးပုံးတပ်ထားတဲ့အိမ် - အစ/အဆုံး
2. ဇာတ်ဝင်ခန်း - အစ/အဆုံး
3. ဘာစီးနေလဲ - အစ/အဆုံး
2. ကိုယ်​သိပ်​ချစ်​ရတဲ့သူကို လက်​ထပ်​ဖို့ဘယ်​လိုစည်းရုံးရမှာလဲ
Popularity Latest Name
Description : Mobile Legends: Bang Bang - မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်ထုတ်လုပ်ထားသော ကစားသမားတစ်ဦးထက်ပိုပြီး အွန်လိုင်းစစ်တိုက်နယ်ပယ်တွင် (အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းအတွင်း) ကစားနိုင်သော ဂိမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။.
အခုချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး ငါးဖမ်းဂိမ်း ဖြစ်ပါတယ်..ရေသူမ ၊ ပင်လယ်နဂါး ၊ ဒဏ္ဍာရီသတ္တ၀ါများ အပါအ၀င် အမျိူးမျိူးသော ငါးမျိုးစိတ် များကို အခုဘဲ ဖမ်းလိုက်ကြရအောင်….
Description : Land of Magic က အွန်လိုင်းဖွင့်ဆော့ရတဲ့ မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ရုံတင်မကပါဘူး။ မှော်ဝင်တိုင်းပြည်လေးမှာ လူသားမျိုးနွယ်တွေနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆေတွေ လျှို့ဝှက်စွာနဲ့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ပုံတွေကိုလည်း ဖော်ဆောင်ထားပါတယ်။
Description : ဇာတ်ကောင်နေရာမှာဝင်ပြီး ကစားလို့ရမယ့် မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံး အပစ်အခတ်ဂိမ်း! ဇာတ်ကောင်တွေအထိ စူပါဟီးရိုးပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရဲ့နေရာမှာဝင်ပြီး ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲကိုဝင်ရောက်ပြီး စူပါဟီးရိုးတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားအတွက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါ